Uvavanyo lwe-antibody lwe-COVID-19 entsha kufuneka kube kanye kuphela kwiinyanga ezi-6 etshintsha umdlalo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Uvavanyo lwe-antibody lwe-COVID-19 entsha kufuneka kube kanye kuphela kwiinyanga ezi-6 etshintsha umdlalo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • udliwano • LGBTQ • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umngcipheko we-Epitome, inkokeli kulawulo lomngcipheko, amanyathelo okuthobela i-COVID, kunye nenkxaso yezokhuseleko, uxele ukuba uLisa Wilson ubizwe njenge-CEO yenkampani ekhula ngokukhawuleza.
Esi inokuba sisiqalo somgangatho omtsha wovavanyo olutsha lwe-COVID olwenzelwe abantu abagonyelweyo nabangagonywanga. Uvavanyo luyakubonisa ukunganyangeki komzimba wakho ekuyibambeni intsholongwane. Ukuba uqinisekile, iya kukuxelela ukuba ulunge kangakanani umzimba wakho ukulwa ne-COVID-19. Olu vavanyo luyafuneka kube kanye kwiinyanga ezi-6. Kuthathelwa ingqalelo njengomtshintshi womdlalo kunye nokugcina ubomi.
Kunyaka ophelileyo, iqela loogqirha be-Epitome Risk, oososayensi, abaphandi kunye namaqabane bafundile ukuba ukuthintela ii-antibodies yinto ekhusela abantu kwi-COVID.
UGqr Fauci kunye ne-White House bayavuma ukuba ukwazi inani lezinto zokuthomalalisa umzimba wakho oveliswe emva kogonyo lwe-COVID sisitshixo sokuqonda inqanaba lakho lokhuseleko ngokuchasene ne-COVID kunye nazo zonke izinto ezahlukileyo.
Iqela le-Epitome Risk liqulunqe uvavanyo olunokuthi uluthathe ekhaya oluya kukwazisa nge-24-48 iiyure zakho.
I-Epitome yinkampani yolawulo lomngcipheko esekwe e-US, egxile ekuthobeleni i-COVID-19 kunye nenkxaso yezokhuseleko. Ngumboneleli ophambili wokuthomalalisa uvavanyo lwe-antibody.
ULisa Wilson, umphathi weqela le-Epitome Risk, useFlorida, e-USA.
ULisa Wilson ebelundwendwe namhlanje Iindaba ezaphulayo, Iveliswe ngentsebenziswano kunye Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi.
UGqirha Fauci kunye ne-White House bayavuma ukuba ukwazi inani lezinto zokuthomalalisa umzimba oveliswe emva kogonyo lwe-COVID sisitshixo sokuqonda inqanaba lokhuseleko lomntu kwi-COVID kunye nazo zonke izinto ezahlukileyo.
Iqela le-Epitome Risk liphuhlise uvavanyo oluza kwazisa umntu inqanaba lakhe lokulwa i-antibody kwiiyure ezingama-24-48. Iziphumo zolu vavanyo zilungile kwiinyanga ezizayo emva kokuba zenziwe kwaye ziya kunika inkcazo ecacileyo yokuba ungakanani umngcipheko wokubamba okanye ukusasaza i-COVID-19.
I-US ikhuphe uphononongo izolo, nge-18 ka-Agasti ka-2021, ebonisa ukuba ukhuselo lwesitofu sokugonya, okanye ii-antibodies ezithomalalisa umzimba wakho emva kokuba ufumene iyeza lakho, liye lehla emva kweenyanga ezimbalwa.
Inqanaba lomntu ngamnye ekuthomalaliseni inqanaba lomzimba womntu liyehla kwizinga elahlukileyo, kuba wonke umntu wahlukile. Ukungathathi hlangothi kwinqanaba le-antibody kuye kwehla nokuba ufumene luphi ugonyo. Kubalulekile ukuba abantu bazi ii-antibodies zabo zokuthomalalisa.
Ayizizo zonke iimvavanyo zokulwa nezifo ezikunika ulwazi olufanayo. Uvavanyo lwe-Epitome Risk's neutralizing test yeyona kuphela kuvavanyo lwe-FDA EUA kwimarike eya kuthi ichaze inqanaba lakho lokhuseleko.
"Nokuba uthatha uvavanyo lwasekhaya okanye olunye uvavanyo lwe-antibody, kufuneka uqiniseke ukuba uvavanyo lwakho luthatha ukungathathi cala," utshilo uLisa.
Umngcipheko we-Epitome ibonelela ngeenkonzo zolawulo lomngcipheko, kubandakanya nolawulo lomngcipheko we-COVID ebantwini, kumashishini, kwimveliso bhanyabhanya, kwimidlalo nakwezinye iindibano kwihlabathi liphela.
Umngcipheko we-Epitome ukwinkqubo yokuba lilungu le Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi kwaye iya kukhokelela kwiqela elitsha elinomdla wovavanyo lwe-COVID-19.
Mamela intetho yanamhlanje.
Usasazo lwe-COVID Anti Viral Treatment Ayilolwe...
UDiana Nighswonger uthi:
Agasti 22, 2021 kwi-12: 41
Ndiyithumela phi le khithi yovavanyo kwaye ixabisa malini?
Agasti 20, 2021 kwi-06: 30
Qikelela ukuba…. Kwakukho i-COVID ngoDisemba wonyaka ophelileyo…. KungoSeptemba kwaye ii-antibodies zam zi-1.92%…. Owu kwaye andikalufumani “ugonyo”